Muxuu yahay ciyaartoyga 75 jirka ah ee hadda ku biiray koox ka dhisan Masar? - BBC News Somali
Muxuu yahay ciyaartoyga 75 jirka ah ee hadda ku biiray koox ka dhisan Masar?
21 Jannaayo 2020
Lahaanshaha sawirka Egyptian Football Association
Image caption Eez Eldin Bahder has signed to play in the Egyptian third division at the age of 75 (Photo: Egyptian Football Association)
Xiriirka kubadda cagta ee waddanka Masar ayaa ku dhawaaqay diiwaan galinta ciyaartoy 75 jir ah oo ku biiray koox ka tirsan horyaalka heerka saddexaad ee waddankaas.
Mas'uuliyiinta maamulka kubadda cagta ee Masaarida ayaa aaminsan in ninkani uu yahay ciyaartoyga ugu da'da weyn ee caalamka, oo xirfadda rasmiga ah ku jira.
Kooxda 6th October, oo kaalmaha ugu sarreeya uga jirta horyaalka Masar ayaa heshiis la saxiixatay ciyaartoygan waayeelka ah, oo magaciisa lagu sheegay Eez Eldin Bahder.
Ilaa iyo hadda lama faah-faahinin macluumaadka ku saabsan nooca uu yahay heshiiska uu la galay kooxda, iyo sida uu u ciyaari doono toona.
Waa nin aan horay looga sii aqoonin gudaha Masar, mana jiraan kooxo rasmi ah oo uu usoo ciyaaray ama taariikh kubadda cagta ah oo uu leeyahay.
Xiriirka EFA iyo iyo Mr Bahder ayaa maamulka buugga taariikha adduunka lagu qoro ee Guinnes ka codsaday inay imaadaan Masar ayna daawadaan ciyaartoygan oo kubadda ciyaaraya, si ay taariikhda ugu diiwaan galiyaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee abid garoonka soo gala.
Maxay tahay sababta aan loo tirinin codad la siiyay Mohamed Salah?
Xiriirka kubadda cagta Masar:'Ramadanka ayaa sabab u ahaa guuldaradeena'
Image caption Eez Eldin Bahder wuxuu heshiis u saxiixay koox ka tirsan horyaalka heerka saddexaad ee waddanka Masar, isagoo ay da'diisu tahay 75 sano
Bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay ayey xiriirka kubadda cagta ee Masar soo jiiteen indhaha warbaahinta, ka dib markii waxba kama jiraan laga soo qaaday codadkii ay ku taageerayeen Maxamed Salaax, xilligii uu u tartamayay ciyaaryahanka ugu wanaagsan xagga ragga ee abaalmarinta Fifa.
Xiriirka aduunka ee Fifa ayaa sheegay in mas'uuliyiinta masaarida ay farta waaweyn kusoo qoreen labadii cod ee looga baahnaa, sidaas darteedna aan la tirinin.
Xiriirka Kubadda Cagta ee Masar ayaa sheegay in ku simaha tabaraha xulka qaranka kubadda cagta ee Masar iyo kabtanka kooxda ay u codeeyeen Salaax, oo ah weerayan u dheeela kooxda Liverpool.
Waraaqaha lagu codeeynayay ayaa waxaa sidoo kale ka maqnaa saxiiha xoghaya guud ee Fifa, kaasi oo ay khasab tahay inuu ka muuqdo.
Abaal-marintaasi cayaaryahanka ugu wanaagsan ee Fifa waxaa sanadkii lasoo dhaafay ku guuleystay laacibka kooxda Barcelona Lionel Messi, oo ka qaaday weeraryahanka kooxda Juventus Cristiano Ronaldo iyo Virgil van Dijk oo daafaca kaga dheela naadiga Liverpool.